फर्सी खाँदा के के फाइदा हुन्छन ? थाहा पाउनुहोस ।
Home जीवनशैली फर्सी खाँदा के के फाइदा हुन्छन ? थाहा पाउनुहोस ।
फर्सी र यसको बियाँजस्तै फर्सीको मुन्टा पनि उतिकै पोषिलो खानेकुरा हो। फर्सीको मुन्टामा पनि क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, आइरन, म्याग्नेसियम, भिटामिन ए, के, बि, फोलेट, कप्पर, म्यान्गनिज जस्ता तत्व पाइन्छ। फर्सीको मुन्टामा प्रसस्त मात्रामा पाइने आइरनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै रक्तअल्पता हुनबाट जोगाउँछ
Previous articleऔद्योगिक विवरण पेश नगर्ने उद्योगपतिलाई कारवाही
Next articleपत्रकारिता पढेर कृषिमा जादू गरेका थमन